🥇 Uhlelo lweqembu lokuzivocavoca
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 671
Uhlelo lweqembu lokuzivocavoca
Ividiyo yohlelo leklabhu yokuzivocavoca
Oda uhlelo lweqembu lokuzilolonga
Ukuba lula nokwenza umsebenzi ozenzakalelayo weqembu lokuzivocavoca umzimba kuyisihluthulelo sempumelelo yenkampani yakho. Uhlelo lwethu lweqembu lokuqina likuvumela ukuthi uzuze le mpumelelo nobulula be-accounting. I-interface yabasebenzisi abaningi bohlelo lwe-accounting yeklabhu yokuzivocavoca ivumela ongoti besikhungo sakho sezemidlalo ukuthi basebenze kalula futhi balawule umsebenzi wabo, njengabaphathi nabaqeqeshi, kanye nokubhekana nokubalwa kwezimali kweklabhu yokuqina. Ukungaguquguquki kohlelo lokuzenzakalela kweklabhu yokuzilolongela ukusungulwa kwe-oda kanye nokuhlaziywa kwamakhasimende kukuvumela ukuthi ungeze ikhasimende elisha ngokuchofoza okukodwa kwegundane noma uhlole ukuthi kunenkontileka eyenziwe ngaphambilini, ngenkathi ulawula yonke inqubo. Ngokuphathwa kahle kweklabhu yokuzivocavoca nokuzisebenzisela kwayo ungafinyelela impumelelo ebhizinisini. Uhlelo lokulawulwa kokuzenzakalela kokulawulwa kwezinqolobane kanye nokwenganyelwa kwezinto ezihlela ukubalwa kwezimali ekilabhini yokufaneleka likuvumela ukuthi ugcine amarekhodi wokukhokhwa kwezinsizakalo, ubuke idatha ezikweletini, noma eminye imikhakha. Ngosizo lohlelo lwethu lweklabhu yokuzivocavoca ungahlela imininingwane ngamaqembu, isikhathi - kukusiza ukubala kahle umthwalo wezakhiwo, amashejuli ochwepheshe, kanye nokubalwa kwamaholo nokuphathwa kwabasebenzi beklabhu yokuqina.
Uhlelo lokulawulwa kweklabhu lokuqina lemibiko yokukhiqiza kanye nokulawulwa kwemininingwane kungumsizi omkhulu ku-accountant yakho. Ukuphathwa kweklabhu yokuzivocavoca kufanele kwenziwe ngokuzenzakalela. Kuze kube manje, singanikela ngokwenza amashejuli wokuqeqeshwa athi kamuva asize emsebenzini nekhasimende futhi agcine ama-akhawunti eklabhini yokuqina. Ukuze kube lula ukusebenza ungasebenzisa amakhadi akhethekile anamakhodi we-bar, lapho uhlelo lwethu lwamaqembu wokuzivocavoca luvumela ukusebenza. Lokhu kwenza kube lula ukulandela ngomkhondo kwamakhasimende, okusiza ukugcina amarekhodi anembile emininingwane yokukhokha. Cabanga nje ukuthi lolu hlelo lukhululeke kanjani futhi lusesikhathini? Ungalanda uhlelo lwethu lweqembu lokuqina mahhala njengenguqulo yedemo. Uhlelo lwethu lunganikeza ukukhanya okuluhlaza okuzenzakalelayo kweklabhu yakho yokuqina! Kukusiza ukuphatha kalula imisebenzi yakho, ugcine umkhondo wemali yakho!
Ukuhlaziywa kuqala njalo ngamakhasimende akho. Amaklayenti angumthombo wenhlalakahle yakho. Lapho ubanakisisa, kulapho bevakashela khona ijimu yakho futhi ngokufanele baletha imali eningi. Iqiniso lokuthi isikhungo sakho sithuthuka kahle kukhonjiswa embikweni okhethekile wokukhula kwesisekelo samakhasimende esenziwa uhlelo lokuphathwa kokubalwa kwemali lokukhishwa kwemibiko nokulawulwa kwabasebenzi. Uma ukukhula kukude nokuhle, bese unaka umbiko wokumaketha. Kukhombisa ukuthi amaklayenti akho ajwayele ukuthola kanjani ngawe. Ungasebenzisi imali ngezindlela zokukhangisa ezingasebenzi. Ngaphandle kokuheha amaklayenti amasha, ungalahlekelwa amadala.
Umbiko okhethekile womsebenzi wamakhasimende ukhombisa ukuthi amakhasimende azisebenzisa kanjani izinsizakalo zakho. Uzokwazi ukubona inani lamakhasimende ahlukile kuzikhathi zamanje nezedlule. Ukuze ulinganise kahle umthwalo wakho wokusebenza, uzokwazi ukubona embikweni okhethekile ukuthi yiziphi izinsuku namahora okuyihora eliphakeme lokuvakashelwa. Ukuqonda amandla okuthenga amanje ngosizo lohlelo, uzokwazi ukukhiqiza umbiko othi "Isilinganiso Esijwayelekile". Kepha kunoma yibuphi ubunzima bamakhasimende, kukhona labo abagqamile, abazimisele ukusebenzisa imali ethe xaxa, kepha futhi badinga ukunakekelwa okukhethekile. Ungathola kalula amaklayenti anjalo athembisayo ngokwakha umbiko "Isilinganiso". Ngaphezulu kwesilinganiso yilabo abachithe kakhulu esikhungweni sakho, futhi uma isilinganiso sisehla, amaklayenti angathandeki anikezwa lapho. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukwenza irejista labakweletayo kuhlelo, uma kunesidingo. Lokhu kulula kakhulu. Bonke labo abangakhokhelanga amakilasi baqoqelwe endaweni eyodwa. Uma unenethiwekhi yamagatsha, uzokwazi ukuhlaziya zombili ngegatsha nangedolobha. Ngabe uthola kuphi imali engenayo?
Ukuncintisana embonini yezemidlalo kuya ngokuya kuqina. Kepha ukufunwa kwalezi zinhlobo zezinsizakalo nakho kuyakhula, njengoba abantu ngokuya befuna ukubukeka bezacile futhi bezemidlalo. Lezi yizindlela zanamuhla. Ukuze usinde endaweni enjalo yokuncintisana, kuyadingeka ukuthi uthuthukise njalo ibhizinisi lakho lezemidlalo, ulandele izindlela ezintsha kubuchwepheshe besimanje bese uzama ukuzisebenzisa ngaphambi kokuba izimbangi zakho zenze. Uhlelo lwethu luyindlela enhle kulabo abafuna ukuthuthukisa ibhizinisi labo futhi banikeze amakhasimende izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kuphela. Uhlelo lwe-USU-Soft lungumsizi wanamuhla ekuhleleni ukuhleleka ebhizinisini lakho!
Kunemisebenzi eminingi ethokozisayo, lapho umuntu angakhetha khona okuvumelana naye ngokusemandleni akhe. Kukhona odokotela bezilwane, abashayeli, osomkhathi, abalungisa izinwele nokunye. Kodwa-ke, kunomsebenzi owodwa ovelele futhi othola ukuthandwa kulezi zinsuku. Sifuna ukuveza ukuthi abaqeqeshi bayadingeka namuhla, njengoba abantu abaningi ngokwengeziwe befuna ukulingana futhi babukeke kahle. Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi kunamakilabhu amaningi okuzivocavoca ahlinzeka ngezinsizakalo zemidlalo. Ngakho-ke, singabona ukwanda kwenani labantu abafisa ukuba ngabaqeqeshi. Kodwa-ke, ukuze wenze iklabhu lakho lokuqina lihambe phambili, udinga abaqeqeshi abangochwepheshe. Ngeshwa, kunzima ukuqonda nokuhlola umuntu ongaba umsebenzi ngesikhathi senhlolokhono. Ngenhlanhla, kunendlela yokukwenza ngohlelo lwe-USU-Soft, oluhlaziya ukusebenza kwabasebenzi ngokuya ngemingcele eminingana. Izindlela ezisetshenziswayo eziyinhloko inani lomsebenzi owenziwe, kanye nempendulo evela kumakhasimende kanye nesilinganiso ohlwini lwabasebenzi abahamba phambili.